नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्प्रिङ अफर, दुई महिनासम्म बिभिन्न प्याकेजमा छुट र बोनस पाउने :: BIZMANDU
नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्प्रिङ अफर, दुई महिनासम्म बिभिन्न प्याकेजमा छुट र बोनस पाउने
प्रकाशित मिति: Feb 9, 2018 9:55 AM
काठमाडौं। नेपाल टेलिकमले आफ्ना ग्राहकहरुकालागि १३ वटा आकर्षक छुटका योजना ल्याएको छ। टेलिकमले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी बैशाख २५ गते सम्मको लागि स्प्रिङ अफरको रुपमा ल्याएको हो।
स्प्रिङ अफर अन्तर्गत टेलिकमले अल टाइम डाटा प्याक, नाइट डाटा प्याक, स्ट्रिमिङ प्याक, एसएमएस प्यमक, नाइट भ्वाइस प्याक, सियुजि प्याक, इन्डिया आउटगोइङ कल लगायतका १३ वटा सेवामा आकर्षक अफर ल्याएको छ।
टेलिकमले अल टाइम डाटा प्याक अन्तर्गत जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलको लागि विभिन्न प्याकेजमा १४ प्रतिशत बोनस थप गरी १० रुपैयाँमा तीन दिनसम्म चौबिसै घण्टा प्रयोग गर्न पाउने गरी २३ एमबी डाटा उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
नाइट डाटा प्याकमा ग्राहकले १५ रुपैयाँमा १ सय ७१ एमबी डाटा ३ दिन सम्म प्रयोग गर्न सक्ने, ४५ रुपैयाँमा ५ सय ७० एमबी डाटा ७ दिन सम्म र ९० रुपैयाँमा १३ सय ६८ एमबी डाटा १४ दिनसम्म चलाउन सक्नेबारे कम्पनीले बताएको छ।
यो वाहेक २ सय रुपैयाँमा ३५ सय ३ एमबी डाटा र ३ सय रुपैयाँमा ७५ सय ८८ एमबी डाटा २८ दिनसम्म चलाउन पाइने छ । नाइट डाटा प्याक राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म चलाउन पाउनेबारे कम्पनिले जनाएको छ ।
कम्पनीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप लगायतका सोसियल मिडिया डाटा प्याकका लागि लागि १२ रुपैयाँमा ५७ एमबी डाटा ३ दिन, २५ रुपैयाँमा १ सय २६ एमबी डाटा ७ दिन र ५० रुपैयाँमा २ सय ६३ एमबी डाटा १४ दिनका लागि दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । १ सय रुपैयाँमा ५ सय ७० एमबी डाटा र २ सय रुपैयाँमा १२ सय ५४ एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका लागि उपलब्ध हुने जनाएको छ ।
यसैगरि जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलका लागि स्ट्रिमिङ प्याक अन्तर्गत युट्युब र वाउटाइम एप्स चलाउन सकिने कम्पनीले बताएको छ । २१ दिन सम्म प्रयोग गर्न सकिने यो प्याकेज अन्तर्गत १ सय १५ रुपैयाँमा १३ सय ६८ एमबी डाटा भोल्युम प्राप्त हुनेछ । कम्पनीका अनुसार ग्राहकले ८० रुपैयाँमा ९ सय १२ एमबी डाटा १४ दिन अवधिका लागि र ४५ रुपैयाँमा ४ सय ५६ एमबी डाटा ७ दिन अवधिका लागि प्रयोग गर्नसक्नेछन्।
ग्राहकले जीएसएम प्रिपेड/पोष्टपेड तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा एसएमएस प्याक अन्तर्गत १२ रुपैयाँमा ५ दिनसम्म उपभोग गर्न पाउने गरी ६० वटा एसएमएस र ६० वटा बोनस एसएमएस गर्न पाउने कम्पनीले बताएको छ। कम्पनीका अनुसार यो प्याक अन्तर्गत ग्राहकले १२ रुपैयाँमा १२० वटा एसएमएस गर्न सक्नेछन् ।
फोरजी डाटा प्याक अन्तर्गत ग्राहकले १२ रुपैयाँमा ३५ एमबी डाटा ३ दिनका लागि, ५० रुपैयाँमा २ सय २८ एमबी डाटा ७ दिनका लागि र १ सय रुपैयाँमा ५ सय ७० एमबी डाटा १४ दिनका लागि पाउन सक्ने छन्। यस्तै २ सय रुपैयाँमा १३ सय ६८ एमबी, ३ सय रुपैयाँमा २२ सय ८० एमबी र ५ सय रुपैयाँमा ४१ सय चार एमबी डाटा २८ दिन समयावधिका पाउन सक्नेछन् ।
जीएसएम तथा सीडीएमए प्रिपेड/पोष्टपेड मोबाइलमा कम्पनीकै नेटवर्कभित्र अल टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत एक दिनका लागि १० रुपैयाँमा ११ मिनेट भ्वाइस कल प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी २५ रुपैयाँमा ३० मिनेटको प्याकेज ३ दिन अवधिका लागि उपलब्ध छ । ५० रुपैयाँमा ५ दिनका लागि ७५ मिनेट, १सय रुपैयाँमा १० दिनका लागि २ सय मिनेट, २ सय रुपैयाँमा २८ दिनका लागि ४ सय १० मिनेट, ३ सय रुपैयाँमा ३० दिनका लागि ६ सय ५० मिनेट र ५ सय ५० रुपैयाँमा ६० दिनका लागि १२ सय मिनेट कल उपलब्ध गराइएको छ । सो कल नेपाल टेलिकमको नेटवर्क भित्रका लागि मात्र उपलब्ध हुने पनि टेलिकमले जनाएको छ ।
ग्राहकले नाइट टाइम भ्वाइस प्याक अन्तर्गत १० रुपैयाँमा ३ दिनसम्म ७० मिनेट र २५ रुपैयाँमा ७ दिनसम्म कम्पनीकै नेटवर्कभित्र २ सय ५० मिनेट कल गर्न सक्नेछन्। नाइट टाइम भ्वाइस प्याक राती १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म मात्र प्रयोग गर्न सकिने बताएको छ ।
नेपाल टेलिकमले सीयूजी (कर्पोरेट युजर ग्रुप) प्याकेज उपलब्ध गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। जीएसएम पोष्टपेडलाई मात्र दिँदै आएको सियुजि प्याकेज नेपाल टेलिकमले जीएसएम/सीडीएमएका प्रिपेड/पोष्टपेड सबैमा यो सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। टेलिकमका अनुसार कर्पोरेट ग्रुपका विभिन्न समूहलाई उपयुक्त हुने गरी ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँको विभिन्न दरका सीयूजी प्याकेजहरु उपलब्ध गराइएको छ ।
सबैभन्दा सस्तो प्याकेज ४०० रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । यस अन्तर्गत सीयूजी ग्रुप भन्दा बाहिर कम्पनीकै नेटवर्कमा १५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा ३०० एमबी डाटा चलाउन र ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिनेबारे टेलिकमले बताएको छ ।
त्यसैगरी ७ सय रुपैयाँमा ३ सय मिनेट भ्वाइस कल गर्न, ८ सय एमबी डाटा चलाउन र १ सय वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । यो वाहेक १ हजार रुपैयाँमा ४ सय ५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, १५ सय एमबी डाटा चलाउन र १ सय ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । १३ सय रुपैयाँमा ६०० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, २१ सय एमबी डाटा चलाउन र २ सय वटा एसएमएस पठाउन तथा १६ सय रुपैयाँमा ७ सय ५० मिनेट भ्वाइस कल गर्न, २७०० एमबी डाटा चलाउन र २५० वटा एसएमएस पठाउन सकिने छ । सबै प्याकेजमा रहेका ग्रुप सदस्यहरु बीचमा भने असीमित भ्वाइस कल गर्न सकिने छ ।
ग्राहकले भारतमा सस्तो दरमा कल गर्न सक्ने गरी इन्डिया आउटगोइङ कल अफर ल्याएको छ। कम्पनीका अनुसार ग्राहकले डेली प्याक, विक्ली प्याक र मन्थ्ली प्याक गरी तीन प्रकारको अफर प्रयोग गर्न सक्नेछन् । डेली प्याक अन्तर्गत एक दिनको लागि ३५ रुपैयाँमा १५ मिनेट कल गर्न सकिने छ। त्यसैगरी विक्ली प्याक अन्तर्गत १ सय ५० रुपैयाँमा ६५ मिनेट र मन्थ्ली प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २२५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । यी प्याक क्रमशः ७ दिन र एक महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने र प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ २२ पैसासम्मको सस्तो दरमा भारतमा कल गर्न सकिने टेलिकमले बताएको छ ।
यस्तै टेलिकमको इन्टरनेशनल इनकमिङ कलमा बोनस अफर समेत छ। ग्राहकले इन्टरनेशनल इनकमिङ कलमार्फत विदेशबाट आएको कल बापत बोनस कल र एसएमएस उपभोग गर्न सक्ने छन्। ७ दिनभित्र ७ मिनेट अन्तर्राष्ट्रिय कल रिसिभ गर्ने प्रत्येक ग्राहकले नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा १४ मिनेट फ्रि कल गर्न र १४ वटा फ्रि एसएमएस पठाउन सक्ने छन् । टेलिकमका अनुसार ग्राहकले फ्रि कल र फ्रि एसएमएसको प्रयोग भने ३ दिन भित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
टेलिकमले एडीएसएल स्पिड स्तरोन्नति गर्दै डाटा बोनस पनि दिने भएको छ। १ एमबीपीएससम्म गतिको एडीएसएल इन्टरनेट सेवामा ५ एमबीपीएसमा अपग्रेड गरेको जनाएको छ । त्यसैगरी एडीएसएल रिचार्ज गर्दा ग्राहकको जीएसएम वा सीडीएमए मोबाइलमा क्रस–बन्डलिङ डाटा बोनस उपलब्ध गराइने बताएको छ। । ग्राहकले २ सय रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा ३० एमबी अल टाइम र ६० एमबी नाइट डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी ५ सय रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा ८० एमबी अल टाइम र १६० एमबी नाइट तथा १ हजार रुपैयाँको रिचार्ज गर्दा १७५ एमबी अल टाइम र ३५० एमबी नाइट डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमले एफटीटीएच सेवामा कर्पोरेट तथा व्यक्तिगत प्याकेज ल्याएको छ। एफटीटीएच (फाइबर अप्टिक कम्युनिकेसन) सेवा अन्तर्गत ब्यक्तिगत ग्राहक र कर्पोरेट ग्राहकका लागि विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनिका अनुसार दुवै प्रकारका ग्राहकले आठ, १४, ३३, ५५ र १ सय एमबीपीएस ब्यान्डविथको प्याकेज प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
ब्यक्तिगत तर्फ ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ४ सय ५० जिबी, ६ महिनाका लागि ११ सय जिबी र १२ महिनाका लागि २४ सय जिबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः रु. ४ हजार २ सय ३७ रुपैयाँ पचास पैसा, ७ हजार ७ सय ९७ रुपैयाँ र १३ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ तोकिएको छ।
१४ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि ७०० जीबी, ६ महिनाका लागि १६ सय जीबी र १२ महिनाका लागि ३५ सय जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने बारे कम्पनिले बताएको छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ४ हजार ७ सय ४६ रुपैयाँ, ८ हजार ८ सय १४ रुपैयाँ र १५ हजार ५ सय ९४ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसैगरी ३३ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ग्राहकले ३ महिनाका लागि १ हजार ५० जीबी, ६ महिनाका लागि २३ सय जीबी र १२ महिनाका लागि ५००० जीबी डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। यी प्याकेजको मूल्य क्रमशःपाँच हजार २ सय ५४ रुपैयाँ ५० पैसा, ९ हजार ८ सय ३१ रुपैयाँ र १७ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ तोकेको छ।
५५ एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि ६५ सय जिबी डाटा २० हजार ३ सय ४० रुपैयाँमा र १ सय एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि ८५०० जीबीको डाटा रु. २५ हजार ७ सय ६४ रूपैयाँमा खरिद गर्न सक्नेछन्। कर्पोरेट क्षेत्रले यो प्याकेज अन्तर्गत ८ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज ३ महिनाका लागि १६ सय जीबी, ६ महिनाका लागि ३६ सय जीबी र १२ महिनाका लागि ८ हजार जीबी डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः ८ हजार ४ सय ७५ रुपैयाँ, १५ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ र २८ हजार ४ सय ७६ रुपैयाँ तोकिएको छ।
१४ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि २२ सय जीबी, ६ महिनाका लागि ५ हजार जीबी र १२ महिनाका लागि ११ हजार जीबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने टेलिकमले बताएको छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः रु. ९ हजार ४ सय ९२ रुपैयाँ, १७ हजार ९ सय ६७ रुपैयाँ र ३२ हजार ५ सय ४४ रुपैयाँ तोकिएको छ।
यसैगरी कर्पोरेट क्षेत्रले ३३ एमबीपीएस गतिको एफटीटीएच प्याकेज अन्तर्गत ३ महिनाका लागि २८ सय जीबी, ६ महिनाका लागि ६४ सय जीबी र १२ महिनाका लागि १४ हजार जीबी डाटा प्रयोग गर्न सक्ने कम्पनिले बताएको छ । यी प्याकेजको मूल्य क्रमशः १० हजार १ सय ७० रुपैयाँ, १९ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ र ३५ हजार २ सय ५६ रुपैयाँ तोकिएको छ ।
५५ एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि १८ हजार जीबी डाटा ४० हजार ६ सय ८० रुपैयाँमा र १ सय एमबीपीएस गतिको प्याकेज अन्तर्गत १२ महिनाका लागि २४ हजार जीबीको डाटा ५१ हजार ५ सय २८ रुपैयाँमा खरिद गर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ।
टेलिकमका अनुसार स्प्रिङ अफर लिनका लागि ग्राहकले *१४१५#मा डायल गर्नुपर्नेछ।
नेपाल टेलिकमले ल्यायो स्प्रिङ अफर, दुई महिनासम्म बिभिन्न प्याकेजमा छुट र बोनस पाउने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।